Qasabadda Jikada ee Buundada oo leh Soo Jiidashada Buufin | Buundada Jikada Bridge
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Rustic Bridge Jikada / WOWOW 2-Gacanta Buundada Jikada Buugga Iyadoo Buufiye Side, 8 Inch Centerset Rustic Jikada qasabadda
WOWOW 2-Handle Bridge Bridge Kitchen Kit with Side Sprayer, 8 Inch Centerset Rustic Kitchen Faucet
Waxay ka samaysan tahay naxaas adag, tubadan weelka lagu kariyo ee qurxinta leh waxaa ka mid ah nidaamka kartoomada diskiga dhoobada ah oo lagu bixiyo 4 dhammeystiran oo waara.
Intaa waxaa sii dheer, waxa ku jira gogol fidiyaha dhinaca naxaasta ah ee loogu talagalay xoog nadiifinta iyo faa iidada. Gacanteeda gacanta ee gacanta ku haysa iyo joomatari-gacmeedka waxay siisaa taabashada ugu dambeysa tubada jikada ee aan waqtiga laheyn.
Tubada jikada ee Brass 23115A1
Qolka jikada ee naxwaha qadiimiga ah ee WOWOW wuxuu kudhisan yahay qaabeynta jikadaada muuqaalka kore. Xaqiiqdii waxay ku dari doontaa taabasho naxdin leh qurxinta jikadaada. WOWOW ayaa caalami ahaan loogu yaqaanaa naqshadaha geesinimada leh. Naqshadeeyayaasha WOWOW isbeddel ayey ku sameeyaan suuqa. Isla markiiba waad ogaan kartaa tan markaad aragto naqshadda tubadan jikada naxaas ah ee gaarka ah. Naqshadeynta WOWOW waxay ku kala duwan yihiin naqshad kasta, maadaama WOWOW aysan u aqoonsanayn in tubooyinka jikada ay wax uun ku darsadaan waxyaabaha ku habboon qurxinta jikada. Dhamaan tubooyinka jikada ee WOWOW waxay si toos ah uga imaan karaan joornaal kasta oo gaar ah oo kusaabsan nashqadeynta jikada cusub ee raaxada leh.
Tubada jikada ee naxaas ah ee WOWOW waxay leedahay naqshad gaar ah oo leh qaabab qaloocsan. Nuuradda naxaaska ah ee la caddeeyay waxay ku daraysaa taabasho xarrago leh sidoo kale jikadaada. Qaabkan qurxoon iyo qaabka guud ayaa si wada jir ah iskugu keenaya buundada buundada qubayska jikada ee WOWOW. Maaha wax aan ahayn tubbada jikada ee naxaasta ah waxaa u mahadcelinaya macaamiisha adduunka oo idil.
Tubbada jikada ee dhalaalaysa ee leh miiraha dhinaca
Muuqaalka ugu yaabka badan ee tubada jikada naxaasta ah ee WOWOW waa midda wax buufiya. Qubooyin badan oo jikada ah ayaa bixiya isku-dhafan hoos udhac ah ama kabaxsan kara tuutaha. Muuqaalkan ayaa sida caadiga ah lagu hayaa tubada jikada lafteeda. Si kastaba ha noqotee kooxdan wax goosata ayaa si gaar ah loogu meeleeyay si aysan u tanaasulin waxqabadka gabi ahaanba. Marka ugu horeysa, adoo kala jiid jiiditaankan gooni u dheereeya waxaad ku fidin kartaa aaggaaga shaqada si aad u ballaadhan. Waxay ka kooban tahay tuubbo biyo ah oo 60 inji ah oo ballaarin karta goobta shaqadaada oo leh 30 inji. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay markii jikadaadu ay ku qalabeysan tahay weelka jikada oo labada weji leh. Marka labaad, waxaad leedahay goonno gooni ah oo ah tubada jikada naxaasta lafteeda, sidaa darteed tuul kastaa wuxuu si wanaagsan ugu gudan karaa waajibaadkiisa gaarka ah.
Muujiyeyaasha dhinaca waxaa si sahlan loogu shaqeyn karaa hal gacan. Tuubada biyaha ka samaysan ee birta birta ah ayaa si fudud loogu jiidi karaa oo si otomaatig ah ayey ugu laabanaysaa meeshii ay markii hore ka yimaadeen. Qulqulka biyaha waxaa loo rogi karaa iyadoo guji fudud oo batoonka gadaal ah, kaas oo si raaxo leh loogu dhejin karo dhinaca dambe ee jiidaha soo jiidaya. Khasab kuguma aha inaad sameyso dhaqaaqyo adag si aad u hesho durdurrada biyaha ee aad rabto. Naqshadeeyayaasha WOWOW waxay xaqiiqdii ka fekereen naqshada ergonomic sidoo kale, si ay kuu siiyaan khibrada ugu fiican ee aad ka heli karto. Waad dooran kartaa biyo kulul ama qabow inaad ka timaadid qaybiyahan. Dadka badankood waxay doorteen biyo qabow, laakiin biyo kulul ayaa waliba laga yaabaa inay ikhtiyaar u ahaadaan. Gaar ahaan goorta aad u adeegsaneyso dhixiyeyaasha dhinac inta badan inaad nadiifiso tusaale ahaan. Waxay ka kooban tahay buufis xoog leh si loogu fududeeyo nadiifinta dheriyada wasakhda ah iyo digsiyada.
Laba gacmood qolka jikada naxaas ah
Tubada jikada naxaasta lafteeda waxaa loogu tala galay laba gacmeed. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si sax ah u maamusho socodka qabow iyo biyaha kulul kulul si fudud. Gacan-galka ayaa si habsami leh loogu shaqeyn karaa iyada oo aysan jirin jahawareer ama gadaal dambe. Waxaad dareentaa tayada gacanta iyo farshaxanka gadaashooda gadaal. Tani dhab ahaantii waxay ka kooban tahay qalab heer sare ah. Sida aad u isticmaasho tubooyinka jikadaada si isdaba joog ah, ugu yaraan dhowr jeer maalintii, waxaad kaliya dooneysaa inaad hubiso in khibradaadu tahay mid fiican.
Markasta oo aad isticmaasho tubada jikadaaga. Sidee ayay u xanaaqsan tahay in laga xanaaqo waxqabadka tubada jikadaaga maalin kasta, dhowr jeer maalintii. Kaliya ku celcelinta si aad u xasuusato inaad sameysay xulasho qaldan xulashada tubada jikadaada. Iyadoo WOWOW xaqiiqdii lagu xasuusin doono doorashada wanaagsan ee aad sameysay. Khibraddani waa mid aan la adeegsan karin, waxaanna hubnaa waqtiga soo socda ee aad u dooran doontid WOWOW markale.
Tubbada jikada oo tayo sare leh
Qasabadda jikada naxaasta leh oo lagu buufiyo dhinac waxay ka samaysan tahay naxaas adag si loo hubiyo tayada iyo cimriga labadaba. Sidoo kale dhammaystirka tayada sare leh ayaa dammaanad qaadaya in qasabadda jikadaadu ka hortagi karto wasakhaynta ama daxalka. Taasi hubaal waxay noqon doontaa qashin marka aad dooranayso qasabadda jikada oo aan lahayn heerar tayo oo isku mid ah. WOWOW waxay dhaaftaa dhammaan heerarka warshadaha waxayna ka sarreysaa ku dhawaad ​​astaan ​​kasta oo A ah.
Ka sokow in tubbada jikada naxaas laga sameeyay ay ka samaysan tahay naxaas adag, tubadan weelka lagu kariyo ee quruxda badan waxaa sidoo kale ku jira nidaam aad u wanaagsan oo ka sameysan xirmooyinka dhoobada. Nidaamkani wuxuu dammaanad ka qaadayaa waxqabadka ugu sarreeya ee cimrigaaga jikadaada jikada oo naxaas ah. Tayada waa inay ahaato astaamaha ugu muhiimsan ee tubada jikadaada, maadaama tayo la’aanta ay sababi karto khalkhal iyo xanaaq badan. Taasi waa in had iyo jeer laga hortago, maxaa yeelay maahan lagama maarmaan in la iibsado tubooyinka jikada oo tayokoodu ka yar yahay. WOWOW waxay cadeyneysaa inaad ka heli karto tayada ugu sareeya qiimo jaban. Maahan wax bilaash ah WOWOW adduunka oo dhan ayaa caan ku ah inuu bixiyo qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta ku saabsan tubooyinka jikada.
Macaamiil kasta oo WOWOW ah ayaa la siiyaa inta ugu badan. Kaliya maahan tubbada qolka jikada oo dhan inay la socdaan xirmo dhammeystiran. Sidan ayaad u rakibi kartaa tubada jikadaada naxaasta si fudud, adigoon adeegsan qalab kasta. Ka fikir sidoo kale galoofyada rakibaadda khaaska ah si aad u ka dhigto waayo-aragnimadaada rakibaadda mid aad u fiican. Intaa waxaa sii dheer, WOWOW waxay macaamiisheeda ula dhaqantaa sidii boqor, si ay ugu laabtaan markasta oo noloshooda ka hartay markay u baahan yihiin tuubbo. Maahan wax aan jirin WOWOW waxay leedahay macaamiil badan oo soo laabanaya oo caalami ah kuwaas oo daacad u ah sumaddan. Tan waxaa sidoo kale lagu gaaraa adeegga macaamiisha aad u fiican.
Si aad hoosta uga xariiqdo qiimaha lacag ee aan ku siinno, WOWOW kama baqayso inay ku siiso muddo damaanad 5 sano ah. Alaab-qeybiyeyaasha badankood, xitaa A-sumadaha, kaliya waxay bixiyaan dammaanad 1 sano ah. Haddii qasabadda jikadaadu burburto sannadka labaad, waxay noqonaysaa halis adiga kuu gaar ah. Oo waa inaad mar labaad soo iibsataa qasabadda jikada cusub. WOWOW ma aragno carwadan haba yaraatee, maadaama qasabadda jikada oo tayo leh ay tahay inay ugu yaraan joogto 5 sano. Taasi waa sababta WOWOW ay kuu siinayso muddadan dammaanad-ka-qaadis la'aanta ah ee tan aan ka yarayn 5 sano. WOWOW waxay ku qanacsan tahay qasabadeeda jikada naxaasta ah, inay iyaduna ku siinayso adeeg soo-celin 90 maalmood ah. Waxaad soo ceshan doontaa lacagtaadii, soo celin buuxda, markii aadan ku cajabin doonin qiimaha lacagta aad ku hesho qasabadda jikada naxaasta ah ee WOWOW. Dammaanad -celinta lacag -celintan waxay caddaynaysaa kalsoonida aan ku qabno qasabadda jikada naxaasta ah!
Faa'iidooyinka qasabadda jikada naxaasta oo kooban:
• Kala sooca bixiyaha dhinaca
• Neef jilicsan oo walwal leh
• Waxay ka samaysan yihiin alaab naxaas ah oo tayo sare leh
SKU: 23115A1 Categories: Buundada Rustic Bridge Jikada, Qubeyska jikada Tags: 8 inji, Bridge, Guridda
Iyadoo lagu buufinayo dhinac